I-12.1 Iimimiselo zeGeometric - Geofumed
12.1 izithintelo zejiyometri
Njengoko sitsho nje, izithintelo zejometri zenza ilungiselelo lejometri kunye nolwalamano lwezinto ngokubhekiselele kwabanye. Masibone nganye:
Lo mqathango uthintela into ekhethiweyo yesibini ukuba ihambelane kwezinye iindawo zayo kunye nenqaku lento yokuqala. Njengoko sithutha umkhethi wezinto, i-Autocad igxininisa amanqaku afanelekileyo ejometri esiya kufana nento yento enye.
Ukufudukela kumgca wesibini okhethiweyo ukuba ube ngu-collinear ngokubhekiselele kumgca wokuqala.
Iibutho zembuthano, i-arcs kunye ne-ellipses ukwabelana ngeziko lezinto ezikhethiweyo zokuqala.
Beka indawo yendawo echanekileyo, yonke i-geometry yento ingatshintshwa okanye ihanjiswe.
Uguqula ilungiselelo lesibini into ekufuneka ibekwe kwindawo efanayo ngokubhekiselele kwinto yokuqala ekhethiweyo. Kukwacaciswa kwakhona ngolu hlobo ukuba umgca kufuneka ugcine i-angle efana ne-reference object. Ukuba inxalenye ye-polyline ikhethiweyo, iya kuba yinto eguqukayo, kodwa ayiyiyo yonke indawo yamacandelo e-polyline.
Inyanzelisa into yesibili ukuba ibe yi-perpendicular to first. Oko kukuthi, ukwakha i-angle ye-90 degrees nayo, nangona zombini izinto akufuneki zithinteke. Ukuba into yesibili i-polyline, kuphela ikhethi elikhethiweyo liguquka.
I-12.1.7 i-Horizontal kunye ne-Vertical
Ezi zithintelo zilungisa umgca kuyo nayiphi na indawo yazo. Kodwa ke, nabo babe ukhetho ebizwa "amanqaku Ababini" ngayo njani ukuchaza njengoko ezi ngongoma kunye ingawaphi orthogonal (tye okanye nkqo, kuxhomekeke isithintelo ezikhethiweyo) kodwa ndingenguye into efanayo.
Iphembelela izinto ezimbini ukuba zidlale ngokukhawuleza. Kucacile, enye yezinto ezimbini kufuneka ibe yindonga.
Inyanzela umgca wokugcina ukuqhubeka komgca wayo kunye nenye into.
Ichukumisa into enye ukuba ihlale ihambelana nomnye ngokuphathelele into yesithathu ekhonza njenge-axis.
Qhathanisa ubude bomgca okanye isigaba se-polyline ngokubhekiselele kwelinye umgca okanye kwicandelo. Ukuba kusebenza kwizinto ezibaziweyo, ezifana nezibonda kunye nee-arcs, yintoni elinganayo ke i-radii.
Post edlulileyo«Edlulileyo ISAHLUKO 12: Ukunqongophala parametric
Post Next Gages yenkqubo yam yakutshanjeOkulandelayo "
Enye impendulo kwi "12.1 Geometric Restrictions"
URaul Manuel Perez Arroyo uthi:
yenza iividiyo zizikhuphe kwaye ziwashiye kwiikhomputha yethu nceda